I-Amazon Sales Central isebenza njani?
Abathengisi be-intanethi abathetha ukuthengisa iimveliso zabo kwi-Amazon kufuneka bakhethe phakathi kwe-Amazon kumthengisi ophakathi kunye ne-Amazon ephakathi. Ezi zikhulu zikhonza njani kwaye zeziphi izinto ezinokuchaphazela ukhetho lwakho? Le mibuzo ndiya kuphendula kule post emfutshane. Siza kugubungela umehluko phakathi komthengisi ophakathi kunye nomthengisi ophakathi kwaye sixoxe ngeenzuzo eziphambili zombini. Ngethemba, le ngcaciso iza kukunceda uqonde ukuba yeyiphi inketho isebenza kakuhle kwi shishini lakho.
I-Amazon Sales Central i-Amazon Vendor Central
Kukho iindlela ezimbini kuphela zokuthengisa iimveliso kwi-Amazon yoshishino lokuthengisa - njengomthengisi (ngamanye amazwi njengomthengisi weqela lokuqala) kunye nomthengisi (iqabane lomntu wesithathu). I-Amazon isebenza ngokuhlukileyo nabathengisi beqela lokuqala nabesithathu. Ukuze uqonde lo mmahluko kufuneka uqale uqonde indlela yokwahlula phakathi kwabathengisi kunye nabathengisi.
Njengomthengisi wenkampani yokuqala, uya kusebenzisa uMthengisi oyintloko njengokuba ngumsasayeli okanye umenzi. Njengomthengisi, uthengisa iimveliso zakho ngobuninzi kwi-Amazon, kwaye i-Amazon, ngokukhawuleza, ixubusha le nto phantsi kwegama layo lomthengi kubathengi. Kule meko, ama-Amazon athabatha ipesenteji yokuthengisa. Nangona kunjalo, kule nkqubo, zonke iimeko zokuthunyelwa kunye nokuhanjiswa kwazo zixutyushwa yi-Amazon. Izinto ezibonelelwe ngabathengisi beCentral abathengisayo zingabonakaliswa yileyibhile "Ukuthunyelwa ukusuka kwi-Amazon."
Njengomthengisi womntu wesithathu, kufuneka usebenzise ama-Amazon Sales Central. Ngaphezu koko, njengomthengisi, unokusebenzisa i-Amazon Sellers Fulfillment (FBA). Kuyinto elula kakhulu kuba ngokwale nkqubo, ama-Amazon athumela yonke imiyalelo yakho ngokwayo. Ngaphandle koko, unokusingatha zonke iinkqubo zokuthumela..
Iinkonzo kunye neentengo ze-Amazon Sales Central kunye ne-Vendor Central
Abahwebi be-intanethi abangathanda ukuchitha ubuncinci kwiinkonzo ze-Amazon baya kunelisa ne-Amazon Seller Central. Kuya kunika ithuba lokubeka amaxabiso amancinci kwimveliso yakho kwaye uhlale ukhuphiswano kwi-niche yakho. Enye inzuzo kukuba unokubeka nayiphi na intengo ocinga ukuba ifanelekileyo kwimveliso yakho. Kuthetha ukuba ukuba ungathanda ukukhuthaza imbono yomgangatho, unokuyenza lula.
I-Amazon ithi iyakubhasozela nayiphi na ixabiso elincinci leemfuno ezipapashiweyo. Nangona kunjalo, abo bathengisi abasebenzisa iVendor Central bangaphikisana nale nkcazo kuba ngokwenene ama-Amazon akwenzanga ukuba njalo.
Ngokutsho kwe-Amazon usetyenziso lweenqununu, naziphi na ezinye ixabiso lomthengisi kufuneka zifanelwe. Kuthetha ukuba ngokukhawuleza xa umntu ekwazisa ama-Amazon malunga nentengo ephantsi kwimveliso ethile ngaphandle kweli qonga, indleko yemveliso iya kulahla. Kunzima ukufumana ii-Amazon ukuphakamisa intlawulo kwakhona kwi-MAP.
Xa kuthelekiswa noMthengisi oPhezulu, abaqabane beCentral Seller banakho ukulawula ngaphezulu kwexabiso. Nangona kunjalo, kwabo bafuna ubudlelwane obuhle ne-Amazon, i-Vendor Central inikeza amathuba amaninzi.
Ukuba sithetha ngokubeka uluhlu lwe-optimization, i-Amazon Seller Central inikeza ukuguquguquka okuphezulu. Ungakwazi ukutshintsha ngokulula izihloko, wenze izilungiso kwiibhola kunye neenkcazelo kunye nokuhlaziya imifanekiso yakho.
Ukugqiba, ndifuna ukuthetha ukuba ndikhetha ukusebenzisa i-Amazon Sales Central njengoko inika inzuzo kunye nenkxaso. Ngaphezu koko, ndihlala ndifikelela kwiNkonzo yoNkxaso yintengiso Source .